Gastronomy nke Japan | Akụkọ Njem
La gastronomy nke japan Ọ bụ otu n'ime ọkacha mmasị m. Ihe ole na ole anaghị amasị m ma ana m agba onye ọ bụla na-aga ala ọwụwa anyanwụ ume ịhapụ ajọ mbunobi ma gbaa ya ume ịnwale ihe niile. Kpamkpam ihe niile.
Eziokwu bụ na gastronomy ndị Japan ọ karịrị nnọọ sushi, Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịga njem ma ọ bụ ịpụ na ịnwa ụlọ nri ndị Japan, ebe a ka anyị ga-ekwu maka ihe kacha mma nke Nri ndị Japan.
1 Japan na nri ya
Japan na nri ya
Nri ndị Europe ejirila anyị mee anụ na tebụl nwere obere efere. Nri ndị Japan dị iche: e nwere obere anụ na ọtụtụ efere. Ọ dabara m ịnọdụ na tebụl ma chee na m ga-ejedebe agụụ ... ma ọ nweghị ihe nwere ike ịga n'ihu.
Nri ndị Japan nwere ọtụtụ sizinal efere, mpaghara specialties na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ thatụ na-ahụ maka otu efere, nke ha ji ruo ọkwa pụrụ iche. N'ụzọ bụ isi mgbe anyị na-ekwu maka iri nri na Japan anyị na-ekwu maka sushi, tempura, ramen, soba, udon, yakitori, sashimi, curry, tonkatsu, okinomiyaki, osikapa, tofu na pịkụl. Kedu aha!
Ka anyi bido na sushi. Ọ bụ ya nri kachasị ewu ewu na mpụga Japan ma n'ime mba ahụ, otu ọzọ, nke na-apụta, karịsịa, n'oge ndị pụrụ iche. Efere nwere osikapa nke a kwadebere ya na sushi mmanya na ịgbaso usoro ụfọdụ, na azụ. E nwere ọtụtụ ụdị mana n'etiti ndị kachasị ewu ewu bụ ndị a:
norimaki: ọ bụ ụdị mpịakọta, ọtụtụ ụdị dị iche iche, a na-azụta ya na ya kombini (Lawson, 7/11).
nigiri: ha bụ bọọlụ osikapa kacha azacha na azụ ma ọ bụ azụ azụ na mkpuchi. enwekwara ọtụtụ ụdị.
temaki: ọ bụ ogologo na nnukwu mpịakọta kpuchie na nori siiwiid jupụtara na osikapa, akwụkwọ nri na azụ.
inari: obu sushi di onu ala ebe etinye osikapa n'ime akpa tofu eghe.
Lee, anyị na-ekwu maka ya eghe akwukwo nri, azu na azu. Ọ bụ nri sitere na Portuguese nke pụtara na mba ahụ na narị afọ nke XNUMX, na Nagasaki, nke ahụ wee gbasaa na Japan na nnukwu ewu ewu. Ọ na-abụkarị isi nri na e nwere ụlọ oriri na ọ speciụ speciụ ọkachamara naanị na tempura, ma mgbe ụfọdụ a tempura dị ka nhazi nke udon ma obu soba.
Enwere tempura nke azụ, prawns, aubergines, mushrooms, ugu, poteto dị ụtọ na e nwere ọbụna a dịgasị iche iche na-agwakọta inine na azụ na ihe oriri na-akpọ kakiage. A na-arụkarị Tempura, mgbe emere ya n'ụdị ọ bụla, jiri obere nnu wee soro ihendori ma ọ bụ wasabi ma ọ bụ obere efere daikon, ntụ ọcha.
ya ọka noodles, thicker karịa soba, ọcha na-atọ ụtọ nke ukwuu. Enwere ike iri ha na-ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi ma enwerekwa njikọ ndị ọzọ na-ewu ewu karịa ndị ọzọ.
Otu n'ime ísìsì dị ọkụ bụ ikechi, esonyere ihendori na akwukwo nri nke mgbe ufodu na eje ozi ndi amara nke oma, ndi kake na broth na chives, ama ama na Osaka, nke curry (ọ dị oke njọ na ị ga-akpachara anya ka ị ghara ịcha ntụ), nke a chikara jere ozi na mochi (achicha osikapa) na nabeyaki Nke na-abịa na mkpuchi tempura.
N'etiti ụdị udọn oyi enwere zaru, jere ozi na efere achara pụrụ iche, ndị tanuki Enwere ike ijere ya ozi dị ọkụ ma na tempura, kitsune na tempura ahụ. Eziokwu bụ na ha niile dị ezigbo ụtọ, ị nwere okpukpo na broth bụ ihe kachasị mma nke kachasị mma, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịhapụ nnukwu efere ahụ.
E nwere ọtụtụ ụlọ nri ndị ọkachamara na udon na kwa ọtụtụ eriri ọnụ ala ọnụahịa, n'etiti 500 na 1000 yen.
ya nudulu buckwheat, ọzọ jide na nke nnyapade. Na-eje ozi ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi na ha na-ewu ewu nke ukwuu na Japan. E nwere ọbụna ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-akwadebe nke ha ma ghara ịzụta ha, na-enweta ọha mmadụ pụrụ iche na n'ihi nke ahụ, nwere aha karịa ụlọ ahịa ndị ọzọ.
Soba kacha mkpa bụ M nwụrụ soba, jiri soba noodles na-sie ma jiri ya rie na soy sauce. A na-eri ụfọdụ nri soba naanị n'oge ụfọdụ n'afọ, dịka ọmụmaatụ na New Afọ Eve. N'ime ụlọ ahịa, a na-azụta ha na ngwugwu, akpọọ nkụ, dị ka anyị na-azụta onyinye, mana ha na-aka mma mgbe niile ma ọ bụrụ na ha dị ọhụrụ.
Varietiesdị soba ndị ọzọ bụ kake soba na efere mere si osisi Efrata, na kitsune soba na e ghere eghe tofu, the tanuki soba ya na tenkatsu na tempura ma obu nanban nke nwere okuko ma obu odo.
Dị ka udon ụlọ oriri na ọ tooụ tooụ kwa enwere ụlọ nri sobaEnwere ọbụna ebe na-enye ma na menu. Ọnụahịa ndị ahụ yiri ya na ị gaghị enwe ike ịmata ọdịiche dị iche iche. Naanị ịmara na ị ga-ahụ ya n'anya.
A na-esite na China ebute noodle na efere dịtụ. Ramen bụ nri dị ọnụ ala ma na-ewu ewu nke ọma, enweghi akụkụ na Japan ebe ị nwetaghị nke a. Ndị ramen Ejiri ya dika isi ofe ya mere e nwere ọtụtụ ụdị ramen, ụfọdụ ndị na-ewu ewu karịa ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, nke shio ramen ọ bụ ìhè, nnu, na ọkụkọ efere ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, ezi. Na miso ramen flavored na miso tapawa na a mụrụ na Hokkaido, na shoyu ramen ọ na-atọ ka ofe soy ma nwee azụ ma ọ bụ ofe anụ ezi. Ndien ke akpatre tonkotsu nke ejiri okpukpu ezi mee ka ekpori ofe. Ọ bụ okpotokpo ma sie ezigbo ezigbo ụtọ.
A na-eme ọka noodles site na ọka wit na e nwere ogologo ma sie ike ma dịkwa mkpa noodles. Na ramen ị nwere ike ịtụzi anụ ezi eghe, achara, mmiri yabasị, agwa, agwa, sie ma ọ bụ nke ndu, ahịhịa mmiri, achịcha azụ akpọ kamaboko, ọka gbara agba ma ọ bụ butter butter. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, menu ahụ na - agụnyekarị efere dịka mgbakwunye dị ka chiches (dumplings dị ụtọ), osikapa ...
Ọ bụrụ na anụ na-amasị gị ma ị bụghị onye na-anụ ụtọ ofe na noodles, yakitori bụ maka gị. Mfe, ọnụ, tọrọ ụtọ. Ọ bụ ihe skewers nke ọkụkọ, anụ na viscera, na-esiri ihe imi ihe. Nchịkọta nhọrọ sara mbara na ụlọ nri pụrụ iche ma dịkwa ọnụ ala karịa ya na ị na-enye biya ọtụtụ ice.
E nwekwara ewu yakitoris dị ka momo, apata ụkwụ ọkụkọ, ndị negima, nke tsukune na ọkụkọ meatloaf, inine na akwa, na torikawa ezi kegriiz ma ọ bụ reba, imeju ọkụkọ. Mgbe ụfọdụ ị nwedịrị ike ịhọrọ ha n’etiti nnu ma ọ bụ nke dị ụtọ. A obi ụtọ!
Ọ bụrụ na azụ bụ ihe gị, ị gaghị atụ egwu iri ya raw mgbe ahụ sashimi bụ maka gị. Ọ bụ ewu ewu dị ka sushi na ọ bụ ezie na azụ obi abụọ adịghị ya na ọ bụ isi ihe mejupụtara E nwekwara sashimi nwere anụ ehi, ịnyịnya ma ọ bụ anụ ọhịa.
Enwere ọtụtụ ụlọ nri sashimi na ọtụtụ ụdị dị iche iche. Ha ga-efe gị tree na ọtụtụ efere nke azu, gbutuo na mpekere di nro ma gosiputa ya nke oma na akwukwo nri ma obu daikon na otutu ice iji mee ka ha di ohuru. A na-ejikarị soy sauce, rie iberibe na ọnụ, ma ọ bụ na wasabi ma obu grated ginger.
Ndị iche iche? Sashimi Sake, magurotaisaba, katsuo. Katsuo bụ azụ a ma ama na Japan. Sashimi ndi ozo abughi azu ma ihe oriri dị ka anụ octopus, squid, prawn, clams na caviar.
Ọkacha mmasị m! Ọ bụ efere a na-eme ekpochapu ya na otutu kabeeji na masa nke nwere ihe di iche iche n’elu. Dabere na ihe ị nwere, a na-akpọ okonomiyaki dị iche iche ma bụrụ nke ukwuu ewu ewu na Osaka na Hiroshima, ọ bụ ezie na na Tokyo ị nwekwara ike iri ya.
Achịcha gbara ọchịchịrị nke a na-ahụkarị na efere a nwere ụfọdụ ekpomeekpo yiri nke Worcestershire ihendori, mana enwekwara ahịhịa na Mayonezi na grated bonito na site na okpomọkụ nke nri na-enye, ọ na-agagharị dị ka a ga - asị na ọ dị ndụ. Enwere ebe ị nwere ike ịkwadebe onwe gị mana n'ozuzu ị hụrụ ka osi nri na-eme ya n'ihu gị.
Think na-eche banyere curry dị ka ose na ite dị na kichin gị? Enweghị ihe ị ga-ahụ ebe a na Japan. Ọ bụ nri, ọ na-esikwa ezigbo ike nke na n’oge nri ehihie, mgbe ụfọdụ ị gafere n’okporo ámá ma ọ karịrị gị.
Enwere ụlọ oriri na ọ curụ curụ curry ọ bụ ezie na ị nwekwara ike ịzụta curry na nnukwu ụlọ ahịa. Efere ọ bụ ụfọdụ osikapa na anụ na nduku na eyịm. Ihendori nwere curry ma ọ dị oke oke ma gbaa ọchịchịrị ma dịkwa ụtọ, ọ bụghị oseose dị ka mkpụrụ osisi Indian nke o si abịa. Enwere ike ịhọrọ anụ n'etiti anụ ezi ma ọ bụ anụ ehi ma na-ejikọkarị nri ahụ na ụfọdụ pịkụl.
N'ikpeazụ, efere a nke nwere ndị fan ya. Ọ bụ ihe akwa iberi nke achịcha na anụ ezi eghe. Ha na-ejere gị ozi n'ozuzu akụkụ nke a set, site na menu, ebe e nwekwara miso ofe, pickles na kabeeji. Enwere mọstad ma ọ bụ tonkatsu ihendori, pịnye Worcestershire ihendori.
A na-arụkwa ya na katsudon, nke na-adọrọ mmasị karị ebe ọ bụ nnukwu efere osikapa na ngwakọta nke àkwá na chives. Ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị, nke a bụ efere gị. Ndien ke akpatre enye esiwak ndikụt sandwiches, katso ájá, na mma na-echekwa na ụgbọ oloko.
Dị ka ị hụrụ Nri ndị Japan na-enye ntakịrị ihe niile, oge niile dị jụụ, emechara nke oma. Can nwere ike ịnwe mmetụta esi nri karịa ihe ọ bụla ọzọ, mana ọbụlagodi agbụ ndị kachasị ewu ewu ma dị ọnụ ala agaghị emechu gị ihu. Gbanwee ezumike gị ka ọ bụrụ ezumike gastronomic. Na Japan, ị gaghị akwa ụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Gastronomy nke Japan
Ihe ị ga-ahụ na Merzouga